လာအိုနိုင်ငံအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရေး ခြေလှမ်းများ အစိုးရက စဉ်းစားလျက်ရှိကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြား - Xinhua News Agency
လာအိုနိုင်ငံအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရေး ခြေလှမ်းများ အစိုးရက စဉ်းစားလျက်ရှိကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြား
လာအိုနိုင်ငံ ဗီယင်ကျန်းမြို့ရှိ ညဈေးအနီး ခရီးသည်များကို စောင့်ဆိုင်းနေသည့် တုတ်တုတ် (Tuk-Tuk) မောင်းသူတစ်ဦးအား ဇူလိုင် ၂၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဗီယင်ကျန်း ၊ နိုဝင်ဘာ ၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်-လာအို ရထားလမ်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ စတင်ခြင်းအပါအဝင် လာအိုနိုင်ငံအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ခြေလှမ်းများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ် Phankham Viphavanh က လာအိုအမျိုးသားလွှတ်တော်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်(NA) ၏ နဝမအကြိမ် ဥပဒေပြုရေး ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးအား ကိုဗစ်-၁၉ (COVID-19) ရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းကို ကိုင်တွယ်ရန်နှင့် ကပ်ရောဂါကြောင့် ဆိုးဝါးစွာထိခိုက်ခဲ့သော စီးပွားရေးပြန်လည်နိုးထရန် နည်းလမ်းများဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် စတင်ခဲ့ကြောင်း Vientiane Times နေ့စဉ်သတင်းစာက နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်၌ သတင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော လွှတ်တော်အစည်းအဝေး၌ ဝန်ကြီးချုပ်က နိုင်ငံ၏ ငွေကြေးနှင့် စီးပွားရေး အခက်အခဲများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် လူမှု-စီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်အား အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြခဲ့သည်။
အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံအား ရထားလမ်းဝန်ဆောင်မှု စတင်ရေးအပါအဝင် တံခါးဖွင့်ရန် ဘက်စုံပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာမြောက် အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို စီစဉ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
လာအိုနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့သည် ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်၌ တရုတ်-လာအိုရထားလမ်း ဖွင့်လှစ်ရန် သဘောတူထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတကာ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ ပြောကြားချက်အရ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါသည် ဆက်လက်ရှိနေပြီး ဗိုင်းရပ်စ် မူကွဲအသွင်ပြောင်းမှုများမှာလည်း ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပြည်သူများအနေဖြင့် ဖြစ်နိုင်သမျှ ကိုယ်ခံအားရရှိရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေသည်။
လာအိုနိုင်ငံ အစိုးရသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် နှစ်မကုန်မီ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏ အနည်းဆုံး ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးရန် မျှော်မှန်းထားပြီး ယင်းကိန်းဂဏန်းမှာ မူလရည်မှန်းထားသော ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်လွန်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် ပြည်သူ ၃.၂၈ သန်းသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး ပထမအကြိမ်ထိုးနှံထားပြီးဖြစ်ကာ စုစုပေါင်း၏ ၄၄.၇၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း၊ လူဦးရေ ၂.၈ သန်းကျော် သို့မဟုတ် ၃၈.၃၈ ရာခိုင်နှုန်းမှာမူ ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဝန်ကြီးချုပ်က ၎င်း၏အစိုးရအနေဖြင့် အဝေးပြေးလမ်းများ၊ ကုန်သွယ်ရေးစင်တာများ၊ စက်မှုဥယျာဉ်များ၊ ခရီးသွားဧည့်သည်များ ဆွဲဆောင်နေရာများနှင့် ဟိုတယ်များ စသည့် စီမံကိန်းများစွာ၌ ငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်ရန် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆက်လက်မြှင့်တင်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အံ့ဩဖွယ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် စီးပွားရေးဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း မြှင့်တင်ရန် ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ပို့ကုန်နှင့် သွင်းကုန်များ တိုးမြှင့်ရန် ဝန်ကြီးချုပ်က ကတိပြုခဲ့သည်။ (Xinhua)
Lao gov’t mulls steps to reopen country: PM
VIENTIANE, Nov.2(Xinhua) — Addressing the opening of the National Assembly, Lao Prime Minister Phankham Viphavanh told members that Laos needs to consider the steps to take to reopen the country, including the start of services on the China-Laos railway.
The National Assembly’s (NA) ninth legislature began its second ordinary session withadebate on ways to deal with the COVID-19 outbreak and revitalize the economy, which has been severely impacted by the pandemic, local daily Vientiane Times reported on Tuesday.
The prime minister outlined the socio-economic development plan for 2022 at the session on Monday, which seeks to address the country’s financial and economic difficulties.
He said the government needs to set outastrategic plan on comprehensive preparations to open up the country, including the start of railway services.
Laos and China have agreed to inaugurate the China-Laos railway on Dec. 2.
International experts say the COVID-19 pandemic is likely to continue and that more potent variants of the virus could develop. This makes it essential to immunize as many people as possible.
The Lao government expects to vaccinate at least 70 percent of the adult population by the end of 2021 —afigure that exceeds the original target of 50 percent.
So far, more than 3.28 million people have receivedafirst dose ofaCOVID-19 vaccine, accounting for 44.78 percent of the total, while more than 2.8 million people or 38.38 percent are now fully vaccinated.
The prime minister also said that his administration would continue to promote local and foreign private investment in order to finance large-scale projects such as expressways, trade centers, industrial parks, tourist attractions and hotels.
He promised to make breakthroughs in the development ofadigital economy and do more to promote commercial-scale production and services, as well as bolster exports and imports. Enditem
Photo : A Tuk-Tuk driver waits for customers nearanight market in Vientiane, Laos, on July 21, 2021. Lao government on Monday decided to extend the ongoing lockdown for another 15 days to help curb COVID-19 infections. (Photo by Kaikeo Saiyasane/Xinhua)
COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရခြင်းကြောင့် အီရန်ုနိင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး သီးသန့်ခွဲနေထိုင်
တီဂရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အရပ်သား၁၀၀ကျော် သေဆုံးခဲ့ဟု အီသီယိုးပီးယားအစိုးရပြော